Anesimba anosvika chibvumirano naDialog | IPhone nhau
Anesimba anosvika chibvumirano naDialog
Alvaro Fuentes | | Noticias, Apple zvigadzirwa
Apple mutengesi Dialog Semiconductor nguva pfupi yadarika akaita mari inosvika mamirioni gumi emadhora muEnergous, kambani iri kuvandudza matekiniki ekureba kwenguva refu kweasina waya uyezve yanga iri nyaya yemakuhwa pamusoro pekushanda neApple kare, maererano neruzivo kubva kuKambani Yakakurumidza.
Sekureva kwaEnergous CEO Steve Rizzone, kubva ikozvino teknolojia yese yeEnergous ichatengeswa pasi pechiratidzo cheDialog. Dialog inogadzira emagetsi manejimendi machipisi uye inonzi inowana maota matatu ebhizinesi rayo kubva kuApple.
Simba rakagadzira WattUp, tekinoroji inobuda isina waya yekushandisa iyo inoshandisa mafambiro eredhiyo kudzoreredza michina kubva pamamita mana nehafu. Pakave pasina humbowo hwekongiri hwekuti Simba rakabatana neApple munzira ipi neipi. Zvisinei, muna 2015 Energous akasaina chibvumirano nekambani yevatengi yemagetsi isingazivikanwe uye pane fungidziro yekuti inogona kunge iri Apple. Chibvumirano pakati peEnergous neApple chinozivikanwa chevatengesi Dialog hachiwedzere humwe humbowo hwekubatana pakati peApple neEnergous. Nekudaro, seKurumidza Kambani inonongedza, zviwanikwa zveDialog zvaizoita kuti kudyidzana kwakadaro kuve kwakanyanya Kubudikidza neDialog, Anesimba iye zvino anowana mukana kuApple, ruzivo rwekuti mashandiro ayo anoshanda sei, uye pokutangira yemukati kana zvasvika pakuronga chibvumirano chakananga nekambani yeCupertino.
Runyerekupe runoratidza kuti Apple iri kuronga kubatanidza imwe nzira yechaji refu-refu isina waya kupinda mune tekinoroji yenguva yemberi iPhone 8, iyo ichatanga muna 2017. Yakareba-renji isina waya kuchaja kwakakwirira kupfuura dzimwe dzakawanda dziripo dzisiri nzira dzekuchaja dzisina waya, sezvo isingaiti. inoda kuti mudziyo uve padyo nenzvimbo yekuchaja, asi kune zvekare matambudziko ekukunda. Nechekureba-renji kuchaja, pane kurasikirwa kwesimba rekufambisa kugona kunoitika sezvo chinhambwe pakati pemutepfenyuro uye chinogashira chichiwedzera. Izvi zvinoreva kuti zvishandiso zvinowedzerazve zvishoma nezvishoma ivo vabva kure nekwavanobva, uye Apple iri kuyedza kufunga kuti ingakunda sei izvo zvishoma.
Apple yanga ichiroja mainjiniya neisina waya yekuchaja ruzivo, ichiisa isina waya yekuchaja ma module kumuyedzo, uye yanga ichitsvaga mutengesi wemawaya asina waya Zviratidzo zvese zvinonongedzera kukurumidza kushandiswa kweiyi nzira mumidziyo yavo mitsva. Zvisinei, hazvisati zvazivikanwa kuti ichaitwa sei uye kana Apple iri kuzobatana nekambani, senge Simba, kuita basa iri.
Iye CEO weEnergous akataura kuti tekinoroji yekambani iyi inofanira kunge yakagadzirira kuchaja kure kweasina waya kuti kuve kwechokwadi pamidziyo yemunhu chero upi zvake kubva mukota yechipiri ya2017, asi haana kutaura nezvekuti kudyidzana neDialog kuchave kuri kuedza kuchengetedza rumwe rudzi. yekubata neApple.
Kureja kuchaja kwemafoni nhare ichave budiriro yepasirese nhare mbozha. Rimwe rematambudziko akakura anosangana nevashandisi zuva nezuva hupenyu hwebhatiri husina kunaka hwenharembozha yavo, semuenzaniso. Vagadziri vezvigadzirwa zvemafoni vanoedza kuita mabhatiri ane huwandu uye hunowedzera hunyanzvi, asi panguva imwechete izvo zvinodiwa zvekushandisa kwemazuva ese izvo zvinopihwa kumidziyo zvinowedzera, kuitira kuti nguva yega yega ivo vanodawo simba rakawanda kumhanya nemaitiro ese. Dambudziko rakafanana nemurungu unoruma muswe; Nhare mbozha dzinoda kuwedzera kushandiswa kwebhatiri uye zviri kuramba zvichinetsa kushandura kubhadharisa mabhatiri aya, saka chokwadi chekutora nharembozha kuchinjazve zvisina waya uye chinhambwe chakakura kubva kwazvinobva chinogona kuvabvumidza kuti vadzorerwe pfupi pfupi nguva pasina kutsvaga socket yekubatanidza charger.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Anesimba anosvika chibvumirano naDialog
Yahoo inogamuchira yechipiri hombe kubira munhoroondo
Kamera + inogadziridzwa nerutsigiro rweiyo iPhone 7 Plus uye inobvumira RAW kubatwa